ပေမယ့ - ကမ္ဘာ့မတ်လ
ပင်မစာမျက်နှာ » ပေမယ့
ဤစီမံကိန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ၎င်း၏တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်ထောက်ခံသူများ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအားဖြင့် Self-ငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ဝင်သွားလာရင်း Self-ငွေကြေးထောက်ပံ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်နေရာထိုင်ခင်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူပူးပေါင်းအစားအစာများနှင့်ခရီးစဉ်အပေါ်ယူ။ ဒါဟာကြောင်းအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ် မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များ တစ်ဦးချင်းစီအရပျကိုသူတို့နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အစားအသောက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်အချို့နှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ပါ။
အဖွဲ့အားလုံးတိုက်ကြီးအပေါ် 100 နိုင်ငံများအနီးအခြေစိုက်စခန်းသွားကြဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင့်ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခြေစိုက်အဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးသို့မဟုတ် postulates အခြေအနေမဟုတ်, မည်သည့်ကုမ္ပဏီ, အစိုးရသို့မဟုတ်စုပေါင်းအပေါ်ငွေရေးကြေးရေးအမှီခိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အပေါ်အလုပ်မလုပ် ပထမဦးစွာကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ လူအပေါင်းတို့သည်လေးသာမှုဆန့်ကျင်ကျွန်တော်ရတယ်။
10 ကီလိုမီတာစီးနင်း 10 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ဤ ဝဘ်ပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအမှီပါဝငျမညျ ထိုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်ကီလိုမီတာသွားလာနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
50 ကီလိုမီတာစီးနင်း 50 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ထို့အပြင်, ဒီလူအပေါင်းတို့သည်ဆုလာဘ် 15.000 နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်ကီလိုမီတာသွားလာနိုင်စွမ်းကိုပေးပါမြင့်တို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
100 ကီလိုမီတာစီးနင်း 100 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ဒီအဆင့်မှာ, သင်တို့၏နာမကိုအမှီ web ပေါ်မှာသာပေါ်လာ, ဒါပေမယ့်လည်းပါလိမ့်မယ် ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ª၏စာအုပ်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိအပိုင်း.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အကျိုးကျေးဇူးများ 75.000 အဆင့်ခြေလှမ်းများ, သင်၏အကူအညီဖြင့်အကောင်းတစ်လမ်းကိုသွားနိုင်စွမ်းပါဝငျမညျ
175 ကီလိုမီတာစီးနင်း 175 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ဒီအဆင့်မှာ သငျသညျကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ª၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကစာအုပ်အပ်မည် အဆိုပါအခြေစိုက်အဖွဲ့၏ကြေးဇူးတငျကွောငျး၌သင်တို့ထံအပ်နှံကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၌ထင်ရှားလတံ့သော။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့အထက်ခြေလှမ်းများ 150.000 အဆင့်အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သည်နှင့်ပါလိမ့်မယ်။
225 ကီလိုမီတာစီးနင်း 225 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ဒီအဆင့်မှာသငျသညျဒါ့အပြင်အပ်မည် ပြီးခဲ့သည့် Marcha ဗဟို၏တရားဝင်စာအုပ်၏anice မိတ္တူ.
သငျသညျကိုထည့်သွင်းရမယ်ဒီအပြင်, အပေါငျးတို့သဆုလာဘ် 262.000 နဲ့အစောပိုင်းခြေလှမ်းမြင့်!
300 ကီလိုမီတာစီးနင်း 300 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ဒီအဆင့်မှာသင်အဆင့်ကို 337.500 ထံမှဆုလာဘ်၏ကျန်နှင့်အတူကယ်နှုတ်မည်နှင့်အစောပိုင်းကခြေလှမ်းများ မတ်လကိုအမေရိကန်တစ်ဦးအကြီးအသံအတိုးအကျယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကနေထိုင်ခဲ့တယ်။
500 ကီလိုမီတာစီးနင်း 500 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
မတ်လအပါအဝင်ယနေ့အထိထုတ်ဝေအားလုံးစာအုပ်တွေ Get ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ1ª၏မူလနှင့်ပထမဦးဆုံးစာအုပ် 10 ကိုယ်တွေ့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှုစစ်ဆေးပါ။
ဒီအဆင့်အထိ Next ကိုသင်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်ဆုလာဘ် 450.000 နဲ့အစောပိုင်းခြေလှမ်းမြင့်တင်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
1.000 ကီလိုမီတာစီးနင်း 1.000 ယူရိုနှင့်အတူတတ်၏။
ဒီအဆင့်မှာကျနော်တို့စာအုပ်နဲ့ web အတွက်ဖော်ပြထားခြင်း, ဖြစ်နိုင်သမျှဆုလာဘ်, စာအုပ်တွေ၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုအဝေးအားပေးရမည်။
နှင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၏သင်္ကေတအဖြစ်ကျွန်တော်အပိုဆောင်းဖြန့်ဝေပေးပို့ပါလိမ့်မယ် 65 95 ၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်အလွနံရံစင်တီမီတာ x ကို ဒီ2ªကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လတိုးတက်ဘယ်လိုအောင်မြင်စွာနှင့်ပြည့်ဝ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။